Rajo la’aanta qoysaska suxufiyiin Soomaaliyeed ee la dilay | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Rajo la’aanta qoysaska suxufiyiin Soomaaliyeed ee la dilay
Sawirka weriye Xasan Cismaan Cabdi (Fantastik) oo lagu dilay Muqdisho 28 Jannaayo, 2012. (Photo by Hinda Dahir).
“Waan dhibaateysanahay illaa maanta. Caddaalad ma jirto. Ma jirto cid baaritaan ku sameysay dilka Xasan Fantastik. Waxaan joognaa rajo beel. Waxaan u baahanahay caawimaad. Kaddib dilkii seygeyga, ma awoodo inaan daryeelo carruurteyda,” sidaasi waxaa tiri Xabiibo Aadan Axmed, 35-jir uu ka geeriyooday weriye Xasan Cismaan Cabdi oo ku magac dheeraa ‘Fantastik’ oo lagu dilay magaalada Muqdisho.
Agaasimihii Radio Shabelle, Xasan Cismaan wuxuu ahaa suxufi aan cabsan una heelan shaqadiisa. Markuu gaaray da’da 29 jir, wuxuu kasbaday sumcad ah inuu noqday suxufi wax baara oo ku nool caasimada Soomaaliya ee Muqdisho oo ay mar ka talin jireen kooxda al-Shabaab oo muddo tobanneeyo sano ah isku dayeysay inay xukunka dalka la wareegto.
Sida ay sheegeen saaxiibadiisa, Xasan Fantastik wuxuu ahaa mid u taagan runta oo ah badeeco dhif iyo naadir ku ah Soomaaliya. Inuu soo bandhigo sheekooyinka la xiriira musuqmaasuqa darteed, ayey kuwa neceb Xasan markasta ugu hanjabi jireen.
Fiidkii Sabtida ee ay taariikhdu ku beegneyd 28 Jannaayo 2012, Xasan wuxuu kasoo laabanayey goobtiisa shaqo, isagoo ku sii jeeda gurigiisa ayey rag hubeysan oo ku lebbisan dharka ciidamada militariga Soomaaliya rasaas la dheceen dhowr jeer. Dadweyne goobta ka dhowaa ayaa isbitaalka ula cararay, hase yeeshee markiiba wuxuu u geeriyooday dhaawicii rasaasta kasoo gaaray. Sida ay sheegayaan saaxiibadiis iyo qoyskiisaba, kuwa beegsaday Xasan waxay u badan tahay inay dhibsadeen warbixinnada ka hadlaya musuqmaasuqa saraakiisha sare ee Dowladda Soomaaliya ee maamuleysay Dekedda magaalada Muqdisho.
Soomaaliya weli waa dal ka mid ah kuwa ugu khatarta badan ee suxufiyiintu ka shaqeeyaan adduunka oo dhan. Warfidiyeennadu kaliya ma wajahayaan rabshad aan dhammaad lahayn iyo dilal qorsheysan, halka kuwa dilalka geysta ay had iyo jeer la baxsadaan dembiyadooda, taasoo sabab u noqotay in mushkiladdu ay sii socoto. Xog uu ururiyay Guddiga Caalamiga ah ee Difaaca Suxufiyiinta (CPJ) ayaa muujineysa in 69 suxufi lagu dilay— oo ay ku jiraan labo la dilay sannadkan 2020— lagu khaarajiyey gudaha Soomaaliya tan iyo sannadkii 1992, mana aysan jirin la xisaabtan iyo baaritaan dhab ah oo lagu sameeyay dilalkan. Shaxda tusmada dembiyada aan la isu ciqaabin ee ay soo saartay CPJ ayaa muddo shan sano oo xiriir ah ka dhigtay Soomaaliya dalka ugu xun ee dadka warfidiyeenka beegsada aan la ciqaabin.
-WUXUU DIIDAY U YEERISTA-
Xasan Fantastik wuxuu booliska mar uga cawday inay jiraan dad isaga ku dabajira oo uu nafsaddiisa uga cabsi qabo, sida ay xaqiijiyeen xaaskiisa iyo saaxiibadiis. Kaliya dhowaan ayaa la ogaaday in muddo usbuuc ka hor geeridiisa in Xeer ilaaliye ka tirsanaa Dowladda uu u yeeray Xasan sabab la xiriirta warbixinta musuqmaasuqa Dekedda ee uu Xasan soo saaray. Hase yeeshee weriyuhu wuu iska diiday inuu u hoggaansamo ammarka u yeerista, wuxuuna iska sii watay shaqadiisa.
“U yeerista waxay ahayd in la cabsi geliyo lagana leexiyo Xasan warbixinnadiisa laakiin ma uusan u dabcin. Wuxuu sii watay inuu soo bandhigo musuqa Dekedda ka jiray, waana sababta aan u maleynayo in loo dilay,” Xasan Wali Abuukar oo ah saaxiib ay wada shaqeyn jireen Xasan Fantastik ayaa sidaa yiri.
Geeridiisa kaddib majirto cid isku hawshay inay baarto sababta dilka.
Iyadoo la joogta saddexdeeda carruur oo kala ah 14 jir, 12 jir iyo 9 jir, ayey Xabiiba Aadan sheegtay, walow cabashadeeda ku aaddan dilka seygeeda ay u geysay booliska haddana habeenkii dilka illaa maanta wax jawaab-celin ah kama aysan helin dowladda, mana taqaanno cid dishay ninkeeda. Weli way qiireysan tahay, wayna argagaxsan tahay, waxayna dareemeysaa cabsi badan oo ku qaadday inay aaminto dowladda in yar xitaa.
“Wuxuu ii ahaa waxkasta— sey, daryeele iyo jacayl siiye qoyskiisa, oo jeclaa dadkiisa iyo waddankiisa. Maalin kasta waan barooranayaa,” ayey tiri Xabiiba oo intii aanu wareysiga ku jirnay ilmadeeda dib u riixeysay, nagana codsatay inaan wareysiga hakino in cabbaar ah.
Maalin kaddib dilkii Xasan, ciidanka booliska ayaa xiray labo nin oo lagu tuhmay dilka. Markii hore waxaa lagu wareystay xarunta dembi barista (CID) kaddibna waxaa loo dhaadhiciyay xabsiga dhexe ee Muqdisho. Boolisku marna ma furin gal baariseed, mana ku wargelin qoyska xogta tuhmanayaasha. Qoyska Xasan unbaa mar dambe ogaaday in tuhmanayaasha laga siidaayey xabsiga shan bilood kaddib oo ku beegneyd 7dii Juun 2012. Si kastaba haku dhacdee, qoysku wuxuu aaminsan yahay in labada tuhmane lagu siidaayey laaluush ay bixiyeen si ay caddaaladda uga baxsadaan.
“Ma garan karo sababta eedeysanayaasha loo siidaayey iyo cidda siideysay intaba,” Maxamed Cismaan Cabdi, oo ah saxafi ka hawlgala Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed ee SONNA, lana dhashay Xasan Fantastik ayaa sidaasi yiri “Marka dil noocan oo kale uu dhaco, waxaad filan kartaa caddaalad. In kiiska si dhab ah loo baaro, eedeysanayaashana maxkamadda la horgeeyo oo la marsiiyo dhammaan habraacyada maxkamadda. Kaddibna caddaalad la gaaro.”
Isla xisaabtan la’aanta waa mid ku baahsan gudaha Soomaaliya, dowladda Soomaaliya ayaase ku andacooneysa inaysan jirin xal fudud oo lagu hagaajin karo amniga suxufiyiinta sidaa darteedna waxay arrintu u baahan tahay in si dhameystiran loo wajaho mushkiladda. Sida uu qabo Aadan Isaaq oo ah Wasiir ku Xigeenka Warfaafinta ee Dowladda Federaalka Soomaaliya, caqabado waaweyn ayaa ku hor gudban Dowladda oo ay ka mid yihiin inaysan jirin awood hay’adaha dowliga u leeyihiin inay baaritaanno madax-bannaan ay fuliyaan iyo dhibaatada amni ee kaga imaaneysa dhanka kooxda al-Shabaab.
“Waxaan nahay dalka kaliya ee Afrika ku yaalla ee hal dhacdo ku waayay ku dhowaad 1000 qof. Suxufiyiinta waxay kamid ahaayeen dadkaas, balse waxay ku jiraan kaalin muhiim ah maadaama aan aaminsannahay in loo beegsado xaqiiqda ay ka hadlaan,” ayuu yiri Aadan Isaaq.
Markii ugu horreysay, Wasiir ku Xigeenku wuxuu ku dhawaaqay in Dowladda Soomaaliya ay qorsheyneyso inay furto gal baaritaanno buuxa oo lagu sameynayo dhammaan dilalka loo geystay warfidiyeenka la beegsaday iyagoo shaqadooda gudanayey. Dilka Xasan Fantastik wuxuu ka mid yahay kiisaska lagu furi doonno baaritaanka.
“Xasan Fantastik iyo tobanneeyo kale oo [suxufiyiin] si xaq darro lagu dilay waxay qeyb ka noqon doonaan suxufiyiintaas galalkooda dib loo furi doono haddii eebe idmo,” ayuu sii raaciyay Wasiir ku Xigeenka hadalkiisa.
Laakiin ururrada u dooda xuquuqda suxufiyiinta ayaa ku dhaliilay Dowladda Soomaaliya inaysan welwel badan ku heyn rabshadda iyo hanjabaadaha ay sida joogtada ah u wajahayaan warfidiyeennada Soomaaliyeed. Haddaan marka hore wax laga qaban tacaddigga isla xisaabtan la’aanta, sida ay leeyihiin kooxaha xuquuqda saxaafadda u dhaqdhaqaaqa, waxaa sii socon doona dhibaatada lagu hayo weriyaasha. Isla sannadkan gudihiisa ayaa labo suxufi ayaa lagu dilay dalka. Mana jirto mid illaa hadda baaritaankiisu bilawday.
DILKII CABDIWALI ONLINE
Qiyaastii 30KM koonfurta magaalada Muqdisho waa degmada Afgooye. Waxaa 16kii Febraayo 2020, rag hubeysan ay ku dileen weriye madax-bannaan, Cabdiwali Cali Xasan (Online) oo ahaa 25 jir. Wuxuu u sii socday hoygiisa markii la tooganayey.
“Waxaa laga toogtay dhowr jeer madaxa iyo feeraha. Midda ugu daran waxay ka haleeshay lafta daanka waxayna burburisay ilkaha,” sidaasi waxaa tiri Luul Cabdi Mire oo ahayd xaaska Cabdiwali Online, una heysa labo ilmood oo yar yar oo kala ah wiil iyo gabar.
“Waan ogahay in suxufigu ka shaqeeya Soomaaliya uu wajahayo halis weyn. Waxaa la dilay weriyayaal badan, laakiin aniga weligay Cabdiwali uma cabsan,” ayey sii raacisay Luul “Weligay ismaan oran degmada Afgooye oo ah halkii uu ku dhashay ayaa Cabdiwali lagu dili doonaa. Kuma uusan warrami jirin arrimo xasaasi ah oo u keeni karay dhib.”
Xorriyadda buuxda ee ay heystaan kuwa dila suxufiyiinta ayaa u oggolaaneysa inay dilal kale geystaan iyadoo waxa laga qaban karana ay yar tahay.
Suxufiyiinta hadda ka hawlgasha dalka waxay ku shaqeynayaan iyagoo og, kana welwelsan khatarta ay ku dhex shaqeynayaan– mana oga xitaa sheekooyinka ay qorayaan tan u keeni karta halista. Waxayna isku sameeyaan is-faafreeb naftooda ah si ay u bad-baadaan.
“Ma jirto wax halis gaar ah oo aan ogahay oo sababi kartay dilka Cabdiwali. Isla xisaabtan la’aanta ayaa siineysa kuwa wax dila fursado badan oo ay weriyayaal kale ku weeraraan,” ayuu yiri suxufiga la yiraahdo Xuseen Cabdulle oo ay Cabdiwali wada shaqeyn jireen.
Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya, Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa war saxaafadeed ku cambaareeyay dilka Cabdiwali isagoo sheegay inay Dowladdu soo qaban doonto kuwii dilkiisa geystay.
Hase yeeshee si la mid ah dilka Xasan Fantastik, afar bilood kabacdi geerida Cabdiwali illaa hadda lama furin gal baariseed la xiriira dilkaas. “Caddaalad Alle ayaa iska leh. Waxaan ka sugayaa Alle inuu caddaalad u horseedo qoyskeyga. Hadda waxaanu ku jirnaa rajo xumo. Waxaanu la dhibtooneynaa geeridiisa darteed. Waanu rajo beelnay,” ayey Luul hadalkeeda ku soo gunnaanuday.
Awood la’aanta Dowladda Soomaaliya ee la xiriirta baarista iyo la xisaabtanka kuwa dila farriin-sidayaasha kaliya may kordhin dilalka qorsheysan ee ka dhanka ah warfidiyeennada, laakiin waxay sidoo kale rajo xumo ku ridday dhibbaneyaasha qoysaskooda.
Hadda oo sagaal sano laga joogo geeridiisa, qoyska Xasan Fantastik iyo saaxiibadiis waxay weli dhowrayaan in mar uun caddaalad loo helo dilkiisa. Waxayna leeyihiin rajadu way libirtay.
“Qoyska iyo saaxiibada Xasan waxaanu xaq u leeyihiin inay ogaadaan sababta loo dilay iyo cidda dishay. Waxaanu weli sugeynaa caddaaladda. Waa taas midda aanu rabno,” ayuu yiri Xasan Wali.
Previous articleXog: Go’aannada adag ee la filayo in laga soo saaro shirka maamul goboleedyada
Next articleNile university oo soo bandhigtay Shaqooyin cusub JOB TITLE: Bachelor in Cyber security lecturer
xogdoonnews - January 19, 2021